Shina fitaovana hafa mpamatsy sy mpamatsy | teraka indray
Anaran'ny vokatra CAS NO. Fampiharana, lozisialy miharo volo, Hyper-Methylated Amino Resin DB303 - Famaranana ny fiara ； Fandefasana kaontenera ； Famaranana metaly ankapobeny fin Famaranana mivaingana ； Rano ...
Anaran'ny vokatra CAS NO. Application
Resinina Amino hyper-Methylated DB303 - Vita ny fiara mandeha amin'ny fiara ； Famonoana kaontenera ； Famaranana metaly ankapobeny fin Famaranana mivaingana ； Famaranana nateraky ny rano ； Famonoana coil.
Pentaerythritol-tris- (SS-N-aziridinyl) propionate 57116-45-7 Manatsara ny fametahana ny lacquer amin'ny substrates samihafa, manatsara ny fanoherana ny fikosehana rano, ny harafesin'ny simika, ny fanoherana ny hafanana ambony ary ny fanoherana ny fikororohana ny lokon'ny loko
Voasakana Isocyanate Crosslinker KL-120 Tsy mitaky fepetra henjana amin'ny fananana iônika amin'ny firaketana anaty rano ary azo ampiasaina na amin'ny rafitra anionika na cationika na amin'ny rafitra tsy ionika.
Agent wetting OT 75 OT 75 dia mpandraharaha mandomando anionika mahery vaika miaraka amina hetsika mando, manalefaka ary manara-penitra, miampy ny fahaizana mampihena ny fihenjanana eo anelanelan'ny sela.
Ethylene glycol tertiary butyl ether (ETB) 111-76-2. Ny tena fanoloana ny etilély glycol butyl etera, mifanohitra amin'izany, fofona ambany be, poizina ambany, fihenan'ny fotôkimika ambany, sns.
Ethylene glycol diacetate （EGDA） 111-55-7 Mba hisolo ny ampahany na tanteraka ny Cyclohexanone, CAC, Isophorone, PMA, BCS, DBE sns, miaraka amin'ny fiasa manatsara ny haavony, manitsy ny hafainganam-pandeha.
Propylene glycol diacetate (PGDA) 623-84-7 Toy ny solvent ho an'ny resina alkyd, resina akrilika, resina polyester, resin nitrocellulose, resina vinaingitra klôroida, maso manasitrana PU
Propylene Glycol Phenyl Ether (PPH) 6180-61-6 Izy io dia endrika tsy misy poizina sy milamina amin'ny tontolo iainana hampihenana ny loko VoC dia miavaka. Satria ny emulsion ny rano isan-karazany mahomby sy ny famafana ny loko gloss ary ny semi-gloss dia tena mandaitra.
Manaraka: Voasakana Isocyanate Crosslinker KL-120